Koox weyn oo England ah oo ku biirtay liiska kooxaha ku dagaalamaya saxiixa Haaland – Gool FM
(England) 24 Sebt 2021. Koox weyn oo England ah ayaa ku biirtay liiska kooxaha doonaya inay ku guuleystaan ​​adeega weeraryahanka reer Norway iyo naadiga Borussia Dortmund ee Erling Haaland, kaasoo la filayo inuu ka tago Borussia dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee reer Norway ayaa xilli ciyaareedkan si cajiib ah ugu bilowday kooxdiisa Borussia Dortmund, isaga oo dhaliyay 11 gool tartamada kala duwan 7 -dii kulan ee uu ilaa haatan ciyaaray.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain, kooxda Liverpool ayaa ah kooxdii ugu dambaysay ee ku soo biirta tartanka loogu jiro saxiixa 21 jirkan reer Norway.
Waxaa jira qodob ku jira qandaraaska Haaland ee Borussia Dortmund, kaas oo fursad u siinaya inuu ka tago kooxda xagaaga 2022, taasi beddelkeedana lagu bixiyo 77 million pounds.
Kooxaha waaweyn ee Yurub ayaa u tartamaya inay Halland ka afduubtaan garoonka Signal Iduna Park, waxaana kooxahaas ka mid ah Real Madrid, Barcelona, ​​Manchester City iyo Manchester United.
Chelsea ayaa sdioo kale ka mid ahayd kooxaha sida aadka ah u xiiseynayay saxiixa da’ayarka heerka caalami ee reer Norway, laakiin ugu dambeyntii way isaga hareen kaddib markii ay dhawaan la soo saxiixdeen weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku.
Miyuu Pirlo noqon doonaa badelka Koeman ee kooxda Barcelona? Fabrizio Romano ayaa ka jawaabaya